Waterest Skin Care Set | CosmeticMyanmar
Home » Kits & Sets » Waterest Skin Care Set
Waterest Skin Care Set
goodal ရဲ့ Waterest Skin Care Set လေးကတော့ အဓိကအားဖြင့် အသားရေစိုပြေလန်းဆန်းစေဖို့ ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အသားရေခြောက်သွေ့ခြင်းကိုကင်းဝေးစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ Waterest Skin Care Set မှာတော့ Waterest First Essence (5.07 oz.)၊ Waterest Emulsion (4.4 oz.)၊ Travel Size Waterest Vital Sleeping Pack (1.0 oz.)၊ Deluxe Moisture Barrier Cream (0.33 oz.) ဆိုပြီး ပစ္စည်းလေးမျိုးပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
GOODAL Premium Snail Tone Up Deluxe Cream Set
Too Faced BEST YEAR EVER ၆၆၈၀၀ ကျပ်
Hydra Fresh Pink Spa Water ၄၈၉၀၀ ကျပ်
KYLIE FALL COLLECTION BUNDLE ၃၀၀၀၀၀ ကျပ်
GOODAL Premium Snail Tone Up Deluxe Cream Set ၇၆၀၀၀ ကျပ်
GOODAL Moisture Barrier Fresh Gel Cream SET ၄၈၀၀၀ ကျပ်
GOODAL Moisture Barrier Skin Care Set ၈၉၀၀၀ ကျပ်
HhH	October 11, 2017 at 9:43 am
Very good for better skin